China Fish Collagen ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-collagen yenhlanzi zikhishwa ezinhlanzini zasolwandle. Ayinakho ukungcoliswa okunambitheka okuhle, futhi umphumela wayo ubonakala kakhulu.
I-collagen yenhlanzi iqukethe izinhlobo ezingaphezu kwezingu-18 zama-amino acid, okunomsoco, futhi okulula ukukumunca, kusetshenziswe iziphuzo, amakhekhe, uswidi neminye imikhiqizo, ekuqiniseni kokudla nase-emulsification, futhi kukhulisa ukugayeka kalula nokumuncwa kokuqukethwe kwamaprotheni ukudla, yiba nomphumela we-dietotherapy.
Ukuthengiswa kwama-collagen peptide amasha avela ezinhlanzini zasolwandle ezibanjwe zasendle kukhuphuke ngama-70% phakathi kuka-2018 no-2019. inhlanzi collagen kanye nokuphishekela indlela yokuphila esimeme nenempilo kubangela ukufunwa kwale mikhiqizo.
Akungabazeki ukuthi abathengi abaningi ngokwengeziwe bafuna ubuhle be-gelatin obususelwa ezinhlanzini nemikhiqizo yokwengeza yokudla.
Ucwaningo lukhombise ukuthi abathengi abangamaphesenti angama-84 bakhombise ukuthandwa okucacile inhlanzi collagen ama-peptide, ngamaphesenti angama-51 awo azimisele ukukhokha inani eliphakeme lale mikhiqizo.
Ngenkathi isidingo sama-collagen peptides avela ezinhlanzi ezifuywayo sihlala siqinile, ama-peptide amaMarine collagen atholakala kahle nawo ayathandwa.
Ngokuya ngokuhlaziywa, "ikhwalithi ephezulu" yama-collagen peptides ezinhlanzini zaseMarine kanye nokukhula okusheshayo kwendlela yokuphila esimeme nenempilo kuqhuba ukufunwa kwale mikhiqizo.
Abantu abanezidingo ezithile zokudla, njengama-pescatarians noma abathengi abangadli inyama ethile ngezizathu zenkolo, nabo bakhulisa ukwanda.
I-Collagen, igama elijwayelekile kodwa elingajwayeleki kakhulu.Ukuqukethwe kwayo esikhunjeni somuntu kuphakeme kube ngaphezu kwama-70%, kwakha inetha le-collagen fiber, ukugcina umswakama wesikhumba, ukuqina.Uma i-collagen iqala ukulahleka, lapho-ke singabhekana nazo zonke izinhlobo zesikhumba izinkinga ezifana nemibimbi, ukuxegiselwa, ukoma njalonjalo.Ngasikhathi sinye, i-collagen futhi ingenye yezingxenye eziyinhloko ze-cornea, futhi ukulahleka kwayo kungenza iso libukeke lilibi.
Langaphambilini I-Collagen Peptide
Olandelayo: Inhlanzi Collagen Peptide